10 Mhuri Dzinodzika Misasa muEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Mhuri Dzinodzika Misasa muEurope
Nguva yekuverenga: 7 maminitsi(Last Updated On: 12/03/2021)
Mupata wakasvibira wakasvibirira, makuru canyon maonero, mahombekombe, kana maguta anoyevedza, Europe izere nenzvimbo dzinoshamisa dzemisasa yemhuri. The 10 akanakisa emisasa emhuri ekuenda kuEurope akakodzera mazororo chirimo, uye kunyange mwaka wechando. Zvese zvakakomberedzwa nemaonero akanaka uye zvakasikwa, uye inonyanya kukosha yakagadzirirwa zororo remhuri risingakanganwike muEurope.
1. Yakanakisa Mhuri Kambi Kunosvikira MuAustria: Yakakwirira tauren
Mataundi eFairytale, mafuro akanaka, uye nzvimbo yeAlps, ari national Park Hohe Tauren kumusoro kwedu 10 nzvimbo dzakanakisisa dzemisasa yemhuri muEurope. Semuyenzaniso, imwe yenzvimbo dzakanakisa dzemisasa munzvimbo iyi Grossglockner iyo inotarisana negomo rakakurumbira reGrossglockner uye ndiyo yepamusoro muAustria..
Pamusoro pe, iyo Innergschloss muEast Tirol ine akanakisa maonero eAlps, saka zvirokwazvo imwe yenzvimbo dzakanakisa yemitambo yemhuri uye mifananidzo. Another Hohe Tauren highlight is the 600-year-old larch forest of Zedlach, kwaunowana nzvimbo dzinoshamisa dze picnic yemhuri.
Kupedza, yemisasa yemhuri muHohe Tauren paki yenyika ichave chiitiko chisingakanganwike kumhuri yese. Pamusoro pazvo zvese, unogona kutanga yako yakasvibira zororo muAustria nekufamba neecko-inoshamwaridzana ICE chitima.
2. Yakanakisa Mhuri Kambi Kunosvikira MuFrance: Dordogne Valley
Mumupata wakanaka weDordogne, Kambi Le Pontet iri paRwizi rweIsle chaipo uye padyo neyakaisvonaka Perigord chateaux. Le Pontet, iwe unowana inoshamisa 3-nyeredzi yemisasa yemhuri ine musasa nzvimbo uye nhare yekurendesa imba. saka, apa vana vachimwaya mudziva, unogona kunakirwa nekuredza kana kushambidza nezuva. Mukupesana ne, iwe unogona kukwira kumusoro kune yekuona uye kuyemura pamwechete iyo Dordogne mupata – Yakakwana yemifananidzo yemhuri.
Le Pontet yemisasa yemhuri iri munzvimbo yakanaka yeRhone-Alps, pedyo neArdeche Gorges kuchengetedza nzvimbo. saka, uchave nenguva inoshamisa yekuongorora zvisikwa zvemusango, zvinonakidza zvekunze zviitiko senge kukwira uye kuchovha, uye kungo nyura zuva nemhepo yakachena.
3. Family Camping Ty Nadan In Brittany, Furanzi
Pane imwe yemahombekombe akanaka muEurope, Ty Nadan muBrittany ndiyo yakanaka seaside yemhuri musasa nzvimbo. Imwe yezvakanakira nzvimbo yeTy Nadan yekudzika musasa ndeyekuti nzvimbo yacho inosanganisa zvisikwa uye mahombekombe. saka, unogona kusarudza pakati pekuendesa vana vako kugungwa, kuvaka sandcastles uye tarisa kuvira kwezuva, kugwa kana kukwira miti. Ino saiti yekudzika misasa ndeye 20 maminetsi kubva kumahombekombe muBrittany.
Uyezve, the campsite is great for a family vacation with small children and babies. Thanks to a baby gear pack and kids’ varaidzo manheru. saka, iwe zvechokwadi uchave neisingakanganwiki yemhuri yekudzika musasa nguva pane akakurumbira mhenderekedzo yeBrittany.
4. Musasa Nzvimbo MuNetherlands: Gelderland
Kumba kune kutumbuka tulips uye iyo Veluwe, Gelderland inoshamisa musasa yemhuri yekuenda kuNetherlands. Iwe nevana muchanyatsoda pasango reVeluwe uye mhuka dzesango, uye 200 minda yeAppeltern.
Jutberg neAckerstate vakarurama 2 yemisasa mizhinji muGelderland, kwaunogona kupaka karavhani yako kana tende. INetherlands inzvimbo yakanaka yekuzorora kwemhuri, chaizvo nekuti kune akawanda akanaka mawara ekutsvaga nevacheche kana vana vadiki uye kunyange vechidiki.
5. Yakanakisa Yemhuri Kamba MuBavaria Germany
Kumba kurwizi rweDanube uye neminda yemizambiringa yeFranconia, Bavaria inzvimbo yakanaka yekudzika musasa kumhuri. Chimbofungidzira uchibuda mukaravhani yako kana tende, kuminda yemizambiringa ine mufaro, mushure mezuva remitambo yemhuri mune zvakasikwa.
Kuchovha bhora mumakomo kana kutenderera tenderera Sango reBavaria, kutsvaga mhuka dzesango, butterflies, neshiri dzisingawanzo – Bavaria inoshamisa yemisasa yezhizha yekuenda. Pamusoro pe, iwe uchaona kuti dunhu rizere nemadziva anoshamisa, Neuschwanstein Castle yevechidiki ma knights uye machindakadzi, kupedzisa yakakwana mhuri yezhizha zororo.
6. Mhuri Kadzika MuNhema Dondo
Kubva paziso reshiri kana kudzika musango, sango dema kuGerman nderimwe renzvimbo dzinonakidza uye dzakanaka dzezvisikwa zvepasirese. Iwe uchawana nzvimbo zhinji dzekudzika musasa mudunhu reBlack Forest sezvo musasa wakakurumbira kwazvo kuGerman.
saka, unogona kusarudza kupaka karavhani yako padyo nemataundi ekare, kana makungwa akaisvonaka uye makomo. Semuyenzaniso, Campingplatz Weiherhof naTitisee yakakwana kune yekuzorora yemhuri zororo, nepo Wolfach musasa yakakosha kumhuri yekukwira uye yebhasikoro.
7. Mhuri Yakadzika Musasa muTuscany Italy
Kamba muTuscany ndiyo ichave yako yemhuri inonakidza zororo zvakadaro. Zvikomo zvakasvibirira zvakasvibirira, yemizambiringa, chizi yemuno, uye truffles dzaita Tuscany culinary kudenga. Kune zvekare pasita uye mapizza evana ehe saizvozvo, nepo vabereki vachifarira ndiro zhinji dzemuno.
Tichifunga izvi, Tuscany inopa zviitiko zvakawanda zvinonakidza zvemhuri yese, se mapaki emvura. Pano iwe waigona kugara kumashure apo vana vachimwaya mumvura, mushure mekufamba kwako kwezuva kumataundi ari pedyo, Pisa naSienna.
Mune rimwe shoko – yakanaka, Tuscany inzvimbo huru yemisasa yemhuri muEurope, yakavanzwa musasa gem zvirokwazvo.
8. Yakanakisa Mhuri Kambi Kunosvikira MuSwitzerland: Iyo Swiss Alpine gungwa
Musasa wepamusoro kana mutende rako kana van, maSwiss Alps ane zvinoshamisa glamping nzvimbo and budget-friendly family camping places. If you are planning family camping in the summer, ipapo nzvimbo yeArolla yekudzika musasa muSwiss Alps yakakwana, sezvo iri kumusoro kumusoro mumakomo. Pano iwe unenge uine mukare maonero, kutonhora kutonhora, uye zvakawanda zve Hiking mudungwe munzira.
zvisinei, kana uchida chiitiko chinozorodza, ipapo kudzika musasa padivi pegungwa kwakanaka. Chekutanga, kana kuchipisa, unogona kungosvetukira mudziva. chepiri, iwe uchave nemaonero akanaka, usina kuenda kure kure nekambi yako.
Chinokosha ndechekuti maSwiss Alps anopa nzvimbo dzakasiyana dzemisasa. Kubva wakasununguka kuenda kuzororo rinoshanda, kumberi kwegungwa kana maonero emakomo – Zvese zvinoshamisa.
9. Yakanakisa Mhuri Kambi Kunosvikira MuItaly: Brione Campsite MuLake Garda
Pamusoro weLake Garda, 4-nyeredzi Camping Brione inzvimbo inorota yemisasa yemhuri muItari. Kumuka kuenda kumaonero edziva, kusvetukira mukati kushambira, kana kudya kwemanheru kwemhuri kunze kwetende rako neimwe yenzvimbo dzinoyevedza pasirese, ndiyo nzira yakanaka yekunakidzwa kwemhuri.
Camping Brione ane 20 matende, uye 39 dzimba dzekufambisa dzekuroja, magetsi, uye zvivakwa zvinoshamisa, kusanganisira imba yemwana. Kana yako mhuri iri inoshinga yemitambo imwe, ipapo iwe unogona kukwereta mabhasikoro uye woenda parwendo kutenderera nyanza nemakomo, kana kunakidzwa nemitambo yemvura. Pane rimwe divi, iwe unogona zvakare kungotonhora nepadziva riri panzvimbo yemisasa kana yemahombekombe egungwa uye uve nenguva yekuzorora yemhuri.
10. Camping Destinations In Europe: Verdon Gorge
Pamakona eGorges du Verdon, mune vechidiki uye vana-vanofarira makambi, ine dziva maonero kana mune yakasarudzika musasa yakaoma, misasa yemhuri muGorges du Verdon haina kumbobvira yawedzera kufadza. Gorges du Verdon ndeimwe yenzvimbo dzinoshamisira dzinochengeterwa zvisikwa pasirese, uye yakakwana kumisasa yemhuri muzhizha.
Kutenda padyo padyo necanyon nemadhamu, kune akawanda emitambo yemitambo zviitiko zvemhuri yese. Semuyenzaniso, kune mapaki emvura uye madziva mumisasa mizhinji munzvimbo iyi, saka unogona kuzorora nedziva. Panguva imwe, unogona kuenda kunoongorora mune imwe yenzira dzakanaka dzekufamba musango, munzvimbo inoshamisa yezvisikwa.
Kupfupisa – Ingoita yako research pane Verdon Gorge kudzika musasa uye kubhuka pamberi, nekuti ino inzvimbo inozivikanwa kwazvo kumisasa yemhuri, uye iwe uchava nemhepo.
Nice kuMarseilles Nechitima
pano pa Save A Train, tichave tichifara kukubatsira kuronga kwako rwendo kuenda ku 10 Best Family Camping Destinations mu Europe nechitima.
Unoda here kupinza yedu blog positi "10 Yakanyanya Mhuri Kambi Kushanyira muEurope" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamily-camping-destinations-europe%2F%3Flang%3Dsn‎ - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
musasa CampingDestinations CampingDestinationsEurope Campingwithkids Familycamping Familytripeurope LuxuryCampingEurope tende
Car Kufamba Matipi, Chitima Kufamba, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Train Travel Greece, Rovedza Kufamba Italia, Travel Europe, Travel Iceland